“…မနက်ဆိုရင် မောင်နှမတဲ့ ညဆိုရင်ပေါင်ခွတယ် ဘယ်သူလဲမေးရင်မတ်တတ်ရပ်ပြီးလက်ညှိုးကိုနင်ထောင်ပြတယ်
နင်ပြောတော့ငါပဲနင့်ကို အထင်အမြင်တွေလွဲနေတာ... အဲဒါကမောင်နှမတဲ့လား kissingတွေဆွဲနေတာ….”
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က“ဒီသီချင်းနားထောင်ကြည့် လန်းတယ်ကွ.”ဆိုတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကူးလာတာ ပြောရရင်ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်က hip hopနဲ့တော့သိပ်မစိမ်းပါဘူး acidတို့ပေါက်တုန်းက ဝယ်ပြီးနားထောင်တာပဲ မျိုးကြော့မြိုင်ခေတ်တုန်းကလည်း မျိုးကြော့မြိုင်မို့လို့
50 centတို့ eminemတို့ကိုလည်းကြိုက်တဲ့အခါကြိုက်တာပါပဲ ဒါပေမယ့်အခုလို မြန်မာလိုပီပီသသကြီး “ဝုန်းဒိုင်း”ကြဲတဲ့သီချင်းကိုတော့ခုမှပဲနားထောင်ဖူးတော့တယ် နောက်မှသိရတာက SZနဲ့ဂျောက်ဂျက်တို့ရဲ့သီချင်းတဲ့ onlineမှာခင်တဲ့သူငယ်ချင်းမလေးတွေကိုအကြောင်းဆုံလို့အဲဒီဂီတအကြောင်းပြောမိတိုင်း ကောင်မလေးတွေက “မုန်းတယ်ဟာ..အဲဒီကောင်တွေကို တော်တော်ရိုင်းတဲ့ဟာတွေ”တဲ့ ဗမာပြည်မှာလည်းသူတို့ကိုအပြစ်တင်ရှုံ့ချတဲ့ဂီတအသိုင်းအဝိုင်းကမနည်း.. ဟိုကဖဲ့ ဒီကဖဲ့ အချင်းချင်းလည်းပြန်ဖဲ့ နဲ့တစ်ကယ့်ကို gangsta ဂီတကြီးဖြစ်နေတော့တယ် ဒါပေမယ့်အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရှိလို့သာ ဒီအခြေအနေထိရပ်တည်နေနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး... ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကျနော်လည်းသူတို့ကိုခပ်ကြိုက်ကြိုက်ရယ် အဲဒီထဲက ဂျောက်ဂျက်ရဲ့ ဆိုပုံဆိုပေါက်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ရယ်ရတာကြောင့်လည်းပါမှာပါ ကျနော်ကနားစွဲသွားပြီဆိုရင် လိုက်ဆိုတတ်တဲ့အကျင့်က ရှိတယ် မှတ်မှတ်ရရ အလုပ်ထဲမှာတစ်ခါ !!!
….အခြောက်ဒီဇိုင်းနဲ့လျှောက်မဖိုက်နဲ့ ကွာလတီကွာခြား ငါ၏စာသား… ကြားတာနဲ့မင်းစောက်ခွက်ကြီး....???` !!!
နင်... နင်...မိုက်ရိုင်းလှချည်လား? !!!!
အနားမှာ အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့ထားဝယ်မလေးကိုသတိမထားလိုက်မိဘူးကိုးဗျ ဂျောက်ဂျက်စတိုင်နဲ့ဟဲနေတာ.. သီချင်းဆိုလို့ဆိုမှန်းတောင်ကောင်မလေးမသိပါဘူး သူ့စိတ်ထဲမှာ အယုတ္တ အနတ္တတွေကို သူကြားအောင်ကျနော်တမင် အော်ရွတ်နေတယ်လို့ပဲထင်တာ သူတို့ရွာမှာ ဟစ်ဟော့လည်းမရှိဘူး ဂျောက်ဂျက်လည်းမရှိဘူးကိုး...နောက်တစ်ခါက အခန်းမှာ… ကျနော့အကျင့်က မူးရင် သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်
အဲဒီနေ့က တိုက်တစ်ထပ်တည်းအတူနေအဒေါ်ကြီးရဲ့ ပူပူနွေးနွေးသားမက်လေး လာလည်တာ (သားမက်ချည်းသက်သက်အလည်လာရတာက သမီးကဗမာပြည်ပြန်သွားပြီကိုး )
ကျနော်လည်းရေချိန်ကိုက်နေပြီဆိုတော့ စပီကာကိုအသံကုန်ဖွင့်ပြီပေါ့ ကျနော့်အခန်းနဲ့ သူ့အခန်းသိပ်မလှမ်းတော့ သီချင်းသံတွေက အတိုင်းသား
အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့ကိုအဒေါ်ကြီး နှစ်ပတ်တိတိစကားမပြောတော့ဘူး :P
ခုဒီကသီချင်းတွေက အဲဒီနေ့ကမူးမူးနဲ့ဖွင့်တဲ့သီချင်းထဲက တခွေပါ အကြိုက်တူရင် ယူကြပေါ့
Posted by သားကြီး | Labels: မြန်မာသီချင်း |
lil wayne-bonus track
lil wayne-the carteriii